कुनै व्यक्तिको मनमा किन आउँछ आत्महत्याको सोच, यसरी थाहा हुन्छ पहिला नै… – Sawal Nepal ||The Power of Information
२०७६ असार २, सोमबार १९:२३ मा प्रकासित
एजेन्सी– चरम निराशा र तनाव उत्पन्न भएपछि मानिसले आत्महत्याको बाटो अँगाल्छ। तर कारण यत्तिमात्रै होइन। आत्महत्यासम्म पुर्‍याउन मानिसलाई विभिन्न कारणले प्रेरित गरिरहेको हुन्छ। आत्महत्या के हो,यस्तो सोच किन आउँछ । कुनै व्यक्तिले आत्महत्या गर्ला भन्ने कुरा पहिले नै थाहा पाउन सकिने एक अमेरिकी अध्ययनले देखाएको छ । येल विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले गरेको अध्ययनमा ब्रेन स्क्यानले कुनै व्यक्तिमा आत्महत्याको विचार आउने नआउने कुरा पत्ता लगाउने देखाएको छ ।
वैज्ञानिकहरूका अनुसार, पश्च आघात (पीटीएसडी) बाट पीडित व्यक्तिको मनमा आत्महत्याको विचार ल्याउने एक रसायन पत्ता लागेको छ । सामान्य व्यक्तिको तुलनामा पीटीएसडीबाट पीडित व्यक्तिमा आत्महत्याको जोखिम बढी हुन्छ । तर चरम जोखिममा रहेका व्यक्तिको पहिचान गर्न गाह्रो हुन्छ ।
अध्ययन निष्कर्ष प्रोसीडिंग्स अफ द नेसनल एकेडमी अफ सायन्सेजमा प्रकाशित भएको छ । पीटीएसडीबाट पीडित मानिसमा एमजीएलयूआर ५ रसायनको स्तर अत्यधिक हुँदा बेचैनी र मूड डिसअर्डरको समस्या आउँछ । यो रसायनको स्तर जाँच्दा आत्महत्याको खतरा अत्यधिक हुने मानिसको पहिचान गर्न सकिन्छ । अनि उनीहरूलाई तत्कालै चिकित्सकीय सहायता दिन सकिन्छ । अनि एमजीएलयूआर५ रसायनको स्तरलाई सन्तुलनमा राखेर आत्महत्याको जोखिम घटाउन सकिन्छ । हरेक व्यक्ति आफ्नो जीवनको अन्तिम क्षणसम्म पनि सफल हुने सपनाका साथ अघि बढिरहेको हुन्छ।
सामान्यतया अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने कुनै पनि व्यक्तिले आत्महत्या गर्नुभन्दा एक–दुई हप्ताअगाडि अब आफ्नो जीवन अन्त्य गर्दैछु, यसपछि मेरा बालबच्चाको के हुन्छ भन्ने सोचेर चाँजोपाँचो मिलाउने, सम्पत्तिको भागबन्डा लगाइदिने गर्दछन्। जीवन यस्तै रहेछ, मेरो छोराछोरीको ख्याल राख्नु भन्ने खालका कुराहरू आफ्ना नजिकका नातेदार, साथीभाइ वा चिकित्सकसँग व्यक्त गर्ने गर्दछन्। त्यसकारण यस्ता खालका संकेत देख्यौं भने त्यस व्यक्तिमा पक्कै आत्महत्याको सोच छ भनेर पहिचान गर्न सकिन्छ।
जब व्यक्ति पारिवारिक, वैयक्तिक, सामाजिक वा मनोवैज्ञानिक बोझको सिकार भई मस्तिष्कले थेग्न सक्दैन, यस्तो अवस्थामा व्यक्तिमा आत्महत्यासम्बन्धी सोच उब्जिन थाल्छ । यस्ता समस्याअन्तर्गत आर्थिक दुर्बलता, पारिवारिक सम्बन्धमा खटपट, बेरोजगारीको चरम अवस्था, असह्य पीडाबोधको अवस्था, जस्तै– पति वा पत्नीको मृत्यु, लैङ्गिक हिंसाजस्ता सामाजिक अपराधको सिकार हुनु पनि महŒवपूर्ण कारणमा पर्छन् । त्यसैगरी, सोचेअनुरूपको आर्थिक वा सामाजिक विकास गर्न नसकेको अवस्थामा पनि व्यक्तिमा आत्महत्याको मनस्थिति विकास हुन पुग्छ ।
यस्ता सोचको बन्दी भइरहँदा मान्छे जिन्दगीप्रति निराशाहीन अवस्थामा हुने गर्छ । उसले जिन्दगीप्रतिको नकारात्मक सोचमात्र लिइरहेको हुन्छ । ऊ असह्य भावनात्मक पीडाले आक्रान्त हुन्छ भने सोचाइ पनि छिनछिनमा परिवर्तन भइरहन्छ । ऊसँग बदलाभाव, अपराधबोध र लज्जाबोध भइरहनुका साथै व्यक्तित्व परिवर्तन हुने र सुत्ने–उठ्ने ढाचामा पनि परिवर्तन हुन्छ । रक्सी खानेहरू अत्यधिक खान थाल्छन् भने नगर्नेहरू कुलतमा लाग्ने सम्भावना बढेर जान्छ । आफ्नो अनुकूलभन्दा बाहिरको अवस्थामा आफूलाई सिध्याउने उद्देश्यले यस्ता व्यक्ति हातहतियार, विषादी, डोरीजस्ता सामग्री साथै राख्ने गर्छन् । उनीहरू निरन्तर डिप्रेसन वा प्यानिक अट्याकले आक्रान्त हुन्छन् भने एकाग्रता नभएको अनुभव गर्छन् । यस्तो अवस्थामा व्यक्ति एक्लोपनको अनुभव गर्छ भने आफू अरूका लागि बोझ भएको आभास पनि गर्छ । व्यक्ति स्वःआलोचना गर्छ र आफ्नोबारे हल्ला फैलाउन थाल्छ । त्यसैगरी, उसले आत्महत्यासम्बन्धी गफ गरिरहन्छ र आफू जन्मेकोमा वा जीवित रहिरहेकोमा दुःखमनाउ गरिरहन्छन् ।
एक पटक फेरि पढ्नुहोस्:
गोलभेडाको भाउ आकाशिए पछी दुलहीले लगाइन् गोलभेडाको गहना !
४ दिदीबहिनीको एकै मण्डपमा विवाह !
नर्तकहरू नाच्दै गर्दा मञ्च नै भासियो ! (भिडियो)